Qananiisaan rikoordii walakkaa maraatoonii Moo Faaraan qabame cabsuun mo’ate – Kichuu
HomeSportsQananiisaan rikoordii walakkaa maraatoonii Moo Faaraan qabame cabsuun mo’ate
Atileet Qananiisaa Baqqalaa dorgommii walakkaa maaraatoonii magaalaa Landanitti Dilbata har’aa gaggeeffameen rikoordii Moo Faaraan qabamee ture cabsuun moa’te.
(bbcafaanoromoo)—Dorgommii walakkaa maaraatoonii kanarratti Qananiisaan sa’aatii 1:00:22’n kan xumure yoo ta’u, rikoordii Moo Faaraan fiigichuma maaraatoonii walakkaa kanaan qabatee ture cabsuun injifate.
Abbaa rikoordii addunyaa fageenya meetira 5,000 fi 10,000 kan ta’e Atileeti Qananiisaan dorgommii walakkaa maaraatoonii kana irratti yeroo jalqabaatiif hirmaate.
Atileet Qananiisaa waliin waliif bahuuf jiru jedhamee kan eegamaa ture atileetiin dhalataa Somaaliyaa lammii UK Moo Faaraa sababii dhukkubaatiif akka hin hirmaanne guyyoota muraasa dura beeksisee ture.
Atileet Qananiisaa Fulbaana darbe Jarman magaalaa Barliinitti, maaraatooniin akka addunyaatti sa’aatii saffisaa sadarkaa lamaffaa ta’een mo’atee ture.
‘Kana mo’achuun anaaf akka nama du’ee ka’eeti’ Atileet Qananiisaa
Maaraatoonii Barliin irratti Qananiisaan rikkoordii maraatoonii cabsuudhaaf amma libsuu ijaatti jala baate. Yeroo sanatti sababii sekondii lamaaf osoo hin cabsiin hafullee, gara fuula duraatti sirriitti itti qophaa’ee akka cabsu BBC’tti himee ture.
Rikoordiin maaraatoonii harka atileetii Keeniyaa Eliwuud Kipchoogee kan jiru yommuu ta’u, haala amma jiru kanaan Qananiisaan rikoordii maaraatoonii addunyaa kana akkuma fageenya meetira 5,000 fi 10,000 of harka galfachuun isaa akka hin oolle tilmaamaa jira.
Magaalaadhuma Landanitti Qananiisaafi Kipchoogeen ji’a dhufa maraatooniidhaan waliif ba’uuf waan jiraniif hedduu hawwiin kan eegamaa jirudha.
Atileetiin Itoophiyaa biraan Birhaanuu Laggasaa ammoo, Maraatoonii Jaappaan Tookiyootti gaggeeffameen 2:04:15’n xumuruun mo’achuu isaa IAAF fuula isaarratti baaseera.
Atileet Birhaanuun kanaan duras Tookiyoodhumatti maaraatoonii mo’atee ture.